I-VPN ehamba phambili yeFirestick (Novemba 2020) - I-Super Fast & Secured - Ungakwenza Kanjani
I-Virtual Private Network (VPN) ithole ukuqashelwa okukhulu eminyakeni yanamuhla yedijithali. Kuyindlela enhle yokuvikela idatha yakho nenethiwekhi ngenkathi upheqa i-inthanethi. Abahlinzeki bokusakaza abanjengo-Amazon bakulethela i-Firestick, i-Fire Cube, namanye amathuluzi afanayo. Lokhu kukunika amandla okuguqula noma iyiphi i-TV enembobo ye-HDMI ayenze ibhokisi lokuzijabulisa.
Kodwa-ke, usengaphansi kosongo oluqhubekayo lokugencwa. Abahlinzeki be-VPN batshale imali ngokunikela nge-VPN ehamba phambili yeFirestick, kuphela. Lezi zingxenyekazi ze-VPN ziyahambisana ne-Firestick yakho futhi zikulethela ukuzilibazisa okuphephile kokuphequlula.
Kunezinketho ezingenakubalwa ezitholakalayo ze-VPN. Akufanele uwele kulabo mahhala ngaphandle kokuthi bavame ukusebenza noma ukufinyelela okulinganiselwe. Ngaphezu kwalokho, basengaba sengozini yezinsongo ezingaba khona. Kungumqondo omuhle ukufuna i-premium ye-VPN. Ngakho-ke, sikulethela uhlu lwe-VPN ehamba phambili yeFirestick:
I-VPN ehamba phambili yeFireStick - Kulula ukuyifaka (2Mins.)
Ukuxhumana:Idivayisi engu-5 Ngesikhathi Esithile
Isici Esihamba phambili:Bulala Shintsha
I-Express VPN ikulethela umkhawulokudonsa ongenamkhawulo ngokufinyelela okunamandla kwe-VPN ezindaweni ezingaphezu kwezingu-160. Iyahambisana nendawo yonke futhi inezinhlelo zokusebenza zamapulatifomu ahlukahlukene. Ungayifaka ku-Firesticks, PlayStation, Xbox, nakwenye idivayisi. Ezipheqululini, uthola isandiso sitholakala. Uthola ukufinyelela kwi-Netflix, i-Kodi, nawo wonke amanye amapulatifomu okusakaza, futhi.
I-VPN esezingeni lomhlaba futhi ethembeke kakhulu ekulethela ukufinyelela kukho konke okuqukethwe ku-inthanethi. Isici esigqame kunazo zonke inkinobho yokubulala evimbela noma yikuphi ukuphazamisa inethiwekhi yakho. Ngokwengeziwe, uthola ukuhlukaniswa kwemigudu yokufihla okungcono kwe-ID. Sekukonke, kuyindlela eyi-VPN enolwazi oluningi.
Kuyasebenziseka futhi kulula ukusetha
Ukuhambisana kweleveli yonke
Ukuphepha kwezinga lezempi
Ifanele ukusebenzisa kungxenyekazi eyodwa ngasikhathi
Ukuxhumana:Idivayisi engu-7 Ngesikhathi Esithile
Isici Esihamba phambili:Ukusekelwa kwe-WiFi yomphakathi
ICyberGhost ingenye i-VPN emi ohlwini lwe-VPN ehamba phambili yezinti zomlilo. Inenethiwekhi yeseva emangalisayo ye-6,400 yokuxhuma okungenakuqhathaniswa. Ungaxhuma kuze kufike kumadivayisi ayi-7 nganoma yisiphi isikhathi. Esikhathini lapho i-WiFi ivame kakhulu njenge-oxygen, une-VPN eyivikelayo.
Okokududuza kwemidlalo, kusebenza ne-PS ne-Xbox. Isekela i-iOS, i-Android, iMac, neWindows. Noma kunjalo, iyahambisana neziphequluli ezimbili, i-Chrome ne-Firefox. Ngaphandle kwalokho, ayigcini izingodo ukuqhubeka nokukhulisa ukuphepha kwakho.
Ukuxhuma okungajwayelekile nobubanzi bomkhawulokudonsa
Isebenzela noma iyiphi inethiwekhi, eyimfihlo noma yomphakathi
Hlala unohlobo oluthile lokunikezwayo lwabasebenzisi
Akuhambisani ngokuphelele nazo zonke iziphequluli namadivayisi, kodwa kuyasebenza.
Isici Esihamba phambili:Ukugunyazwa
ISurfShark ikulethela inketho ye-VPN eshibhile kunabanye abasohlwini. Itholakala emazweni we-63 enamaseva angaphezu kwe-1,700. Noma kunjalo, isici esiteleka kakhulu ukuxhumeka okungenamkhawulo kwamadivayisi. Kulungile, futhi ungaxhuma amadivayisi amaningi ngendlela othanda ngayo ngaphandle kokukhokha okungeziwe.
Kukodwa kubeka iSharpVPN njengenye yezinto ezinhle kakhulu laphaya. Ngokuphepha, uthola ukuhlanganiswa kwebanga lezempi nokubethela. Yini enye? Unenketho yohlu olumhlophe ekuvumela ukuthi uvumele izinhlelo zokusebenza ezithile nge-VPN. Ngamanye amagama, unganquma ngaphakathi kwedivayisi yakho ukuthi iziphi izinhlelo zokusebenza ezizosebenzisa i-VPN.
Gunyaza ukwenza ngokwezifiso
Ukunikezwa kwansuku zonke
Ithengeka kakhulu kunamanye ama-VPN
Kukhawulelwe kuNetflix nakweminye imitapo yolwazi yokusakaza (15)
Isici Esihamba phambili:Isipele Sesitoreji Esibetheliwe
I-IPVanish inento eyodwa ebeka phambili kunezinye izimbangi. Ikulethela ukusetshenziswa kwezinsuku ezingama-30 njengesivivinyo. Ngakho-ke, ungayisebenzisa kuqala ukuthola ukuthi uyayidinga noma cha. Ngokuxhumeka okungenamkhawulo, kumahhala ukulanda nokusebenzisa noma iyiphi idivayisi onayo ngokusebenza kwepulatifomu.
Emhlabeni wesitoreji sefu, iza ne-250GB yesipele sesitoreji sokubethela samafayela akho. Ngakho-ke, unokuphepha okwengeziwe. Sekukonke, i-IP Vanish isebenza ngokumangazayo njenge-VPN ngaphandle kokuthinta isivinini sakho. Kukulethela ukuxhumeka okungenamthungo.
Isitolo esibethelwe esingu-250 GB
Ukulanda Kwedivayisi Okungenamkhawulo Nokusebenzisa
Isilingo Samahhala Sezinsuku ezingama-30
Amaphakheji Angabizi kakhulu
Ambalwa amaseva kunamanye akuhlu
5. Ukufinyelela i-Inthanethi kwangasese
Ukuxhumana:Amadivayisi ayi-10 Ngasikhathi
Isici Esihamba phambili:Izindlela eziningi ze-VPN
Uma ungafuni ukungena ophithizelweni lokuqonda imisebenzi nezici ezahlukahlukene, i-Private Internet Access ikulethela insizakalo eqondile ye-VPN. Inenethiwekhi ebanzi yamaseva angaphezu kwe-12,000 anokuxhumeka okungalinganisiwe.
Ungayisebenzisa njengomuntu ongaziwa bese uxhuma namadivayisi afinyelela kwangu-10. Isebenza namapulatifomu amakhulu kepha ayinakho ukuhambisana kwedivayisi jikelele. Ungafinyelela kokuqukethwe okunomkhawulo nakho konke okunye. I-interface yayo esebenziseka kalula iyenza ivelele ngezintengo zayo zokuncintisana.
Ukusetha okusheshayo, okulula ukuyisebenzisa
Ukutholakala okubanzi kwamaseva
Ayinikezi lutho olwengeziwe
Ukuhambisana:I-Universal With Cloud
Ukuxhumana:Amadivayisi ayi-12 ngasikhathi
Isici Esihamba phambili:Ukuvikelwa kwe-WireGuard
I-VPN enamandla yi-VPN eguquguqukayo etholakalayo etholakala kuyo yonke ipulatifomu, kufaka phakathi ifu namadivayisi ongalindeli i-VPN kuwo. Lokhu kukodwa kukwenza ugqame yize kutholakala ukungatholakali nenombolo ebonakala iphansi kakhulu yamaseva ohlwini.
Ingxenye ehamba phambili ngeStrongVPN ukuthi ihlangene ne-WireGuard, ngakho-ke uyakwazi ukufinyelela izinsizakalo zabo, ukuvikelwa kanye nezinketho futhi. Okubaluleke nakakhulu, kubonakala sengathi iStrong VPN isebenzisana njalo namanye amapulatifomu ukukulethela amathuba amaningi. Iza ne-250 GB yeyunithi yokugcina ebethelwe.
Kulula ukusetha nokusebenzisa. Uthola izinketho ezifanayo namanye ama-VPN ohlwini. Kodwa-ke, uma ufuna i-VPN eshibhile enethuba lokukhuliswa, lokhu kuyisinqumo esifanele.
Isitoreji esibethelwe esingu-250 GB
Ihambisana nawo Wonke Amapulatifomu Nedivayisi
Inombolo ephansi yamaseva namazwe ambalwa
Ukuxhumana:Amadivayisi we-6 Ngesikhathi Esithile
Isici Esihamba phambili:Isivinini se-Ultrafast
Ama-VPNs avame ukuthatha inani kwijubane lakho le-inthanethi kungakhathalekile ukuthi ukhetha hlobo luni. I-NordVPN yaziwa ngokunikela ngejubane elingenakulinganiswa nokuxhuma nokuhambisana okuphezulu nedivayisi yakho, uxhumano lwe-inthanethi, kanye nohlelo lokusebenza. Ngakho-ke, ngumhlinzeki wesevisi we-VPN ogcwele futhi onamandla.
Uma ufuna ukuphepha okuqinile ku-VPN, lena inokuvikelwa kwe-malware, ukubethela, nokunye okuningi. Sekukonke, iyi-premium-grade VPN, nayo ebuyela emuva. Ngokuqhathaniswa, kungukugcina okubiza kakhulu kwe-spectrum yama-VPNs.
Kugcwele izici ezigxile ekusebenzeni
Aliphazamisi isivinini futhi liletha izinsizakalo ezingaphazanyiswa
Kubiza kakhulu kunezinye izinketho ze-VPN ezitholakala emakethe
Isici Esihamba phambili:Ukusetha Okusheshayo
Lokhu kuseyi-'VPN 'entsha' noma 'entsha' emakethe ekhula ngokuya ngokuthandwa ngenxa yezinsizakalo zayo ezihlukile. I-VPN yangasese ikulethela konke okufanele kwenziwe i-VPN. Ungadlula ibhulokhi yesifunda ngeFirestick yakho noma ngeFirecube. Ngokwengeziwe, uthola isivinini esikhulu ngokwazi ukuvula umkhawulo.
Kuyashesha ukusetha futhi kusekele zonke izinhlobo zezinhlelo zokusebenza. Kodwa-ke, njengoba isakhula, ayihambisani nendawo yonke. Kunamanye amadivayisi engena ngaphakathi kuwo. Ngokufanayo, ayikwazi ukudlula ezinye izingilazi zaseChina, kepha iyi-VPN ekhulayo futhi izokhombisa izinzuzo eziningi ngokuzayo.
Kulula ukusetha ngemizuzwana engama-60
I-VPN entsha eguquguqukayo ekuthuthukiseni
Ihambisana ne-Firestick namanye amapulatifomu ajwayelekile
Ayinakho ukuhambisana kwendawo yonke
Ishoda ngamaseva, futhi kuseyipulatifomu ekhulayo
Isici Esihamba phambili:Ukunakekelwa Kwekhasimende Okuhle
I-UltraVPN iyikho konke ongalindela ukuthi i-VPN ibe yikho. Unokuhambisana nayo yonke ipulatifomu, kufaka phakathi i-FireStick. Ikuvumela ukuthi uvule indawo futhi ufinyelele okuqukethwe kusuka noma yikuphi emhlabeni jikelele. Unokungaziwa ngokuphelele nokuvikelwa kuma-hacks kanye nokuqashwa okungenzeka.
Ikulethela uhla lwezinsizakalo ezinezinyanga ezi-6 zokuvikelwa kwamahhala kwe-VPN nesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30. Yini eyenza i-UltraVPN ivelele ngempela? Kuyinto ephawulekayo yokuhlinzekwa kwamakhasimende nokuguquguquka. Uma ukhethe uhlelo olungalungile noma unenkinga nge-VPN, ukunakekelwa kwamakhasimende abo kuzonikeza isisombululo ngokushesha.
Amazwe angaphezu kwe-100 namaseva we-1000
Ukuxhaswa kwamakhasimende okuncomekayo
Izipesheli nezimo eziguqukayo
Insiza ephelele ye-VPN
Ayinikezi noma yini enye enye i-VPN eyaziwa ngokuletha etafuleni
10. IHotspot Shield
Isici Esihamba phambili:Ukuthembeka Okuqinile
IHotspot Shield mhlawumbe i-VPN eqonde kakhulu ohlwini. Kuyinto engenzeka kakhulu futhi engabizi kakhulu, enezinsiza ezahlukahlukene ezenzelwe i-VPN. Ungaxhuma kuze kufike kumadivayisi we-5 ngasikhathi. Isihlangu seHotspot sesidume ngokumangalisayo kwezokuzijabulisa, kusuka ekusakazeni amavidiyo kuya ekudlaleni imidlalo.
Inomklamo omncane futhi ayikhombisi ukungenelela nganoma iyiphi indlela. Unokuhambisana okujwayelekile kwepulatifomu nokufinyelela kwe-FireStick. Sekukonke, kuyindlela engcono kakhulu ye-VPN enhle ngamanani ashibhile.
Eshibhe kunawo wonke ama-VPN
Kuhle kakhulu kwezokudlala nokuzijabulisa
Inzuzo yokusebenzisa i-VPN:
I-VPN ayilona ithuluzi lokugenca. Kuyithuluzi elisemthethweni onelungelo lokulisebenzisa ukuvikela ubuwena bakho nokuvikela imininingwane yakho. Cishe wonke uhulumeni emhlabeni jikelele ugcina ukubhekwa kwabasebenzisi kanye ne-pries emisebenzini yabo.
Ngokuhlanganisa i-VPN ehambisanayo, ungavimbela lokhu ukuthi kungenzeki. Kunezinye izinzuzo zokusebenzisa i-VPN ngeFirestick.
1. Vikela Imininingwane Yakho Nobunikazi
I-Amazon yinethiwekhi ebanzi eneplatifomu yokuthenga online, umculo, nezinsizakalo zokusakaza ividiyo, phakathi kokunye okungeziwe. Kungenzeka ugcine idatha yakho ne-Amazon maqondana nokukhokha, ikheli, nolwazi olwengeziwe lomuntu siqu.
Ngokusebenzisa i-VPN, uvikela idatha yakho ukuthi ingaweli ezandleni ezingafanele. Ubunikazi bakho buhlala buvikelekile, futhi ungahamba ngokusakaza kwakho nokuphequlula kwakho ngaphandle kokukhathazeka.
2. Ukufinyelela Okuvinjiwe Okuqukethwe
Ngaphandle kokuthandwa kwayo, kunenkinga enkulu yokuba ne-Firestick, i-Fire Cube, noma enye idivayisi efanayo yokusakaza. Konke lokhu kunqunyelwe esifundeni. Ngakho-ke, ngeke ukwazi ukufinyelela kokuqukethwe okunomkhawulo endaweni yakho.
Kubukeka kungalungile njengoba ukhokhela cishe lonke uhlobo lokuqukethwe olutholakala kulawa madivayisi. I-VPN ingakusindisa kalula enkingeni futhi ikusize uthole ukufinyelela kokuqukethwe okuvinjiwe.
Ngenkathi lezo ezimbili zicaciselwe i-Firestick yakho, kunezinzuzo eziningi zokuba ne-VPN isiyonke. Kusukela ekuvikelekeni kwekheli lakho le-IP, ukuxhumeka, nedatha, ekuvinjelweni kokulandela, ukucubungula, nezinye izenzo ezifanayo, i-VPN ikhombisa ukuthi iyimpahla ebaluleke kakhulu. Uma uvimbele okuqukethwe, noma ipulatifomu efana ne-YouTube, imidlalo ethile noma amawebhusayithi, ungakuthola nge-VPN.
Lapho unayo, uhlu lwefayela le-i-VPN ehamba phambili ye-Firestick.Isici esiphawuleka kakhulu ukuthi ngayinye yalezi-VPN iza nezici ezinhle nokuvikelwa okungafani nabasebenzisi.
Ngakunye kwalokhu, unokutholakala kwamadivayisi amaningi. Cishe bonke banesiqinisekiso sokubuyiselwa imali sezinsuku ezingama-30, abanye banokuningi futhi okunye kuncane. Sekukonke, lokhu okungcono kakhulu esingakuthola ngokusakazwa kwakho okungenamkhawulo ngokuphepha okukhulu! Thola noma yikuphi kwalokhu futhi ukujabulele!
Umuntu Omubi Kunabo Bonke Emhlabeni: Ungakubuka kuphi?
UBravo Uthi Abadlali Balemukela Iphutha